Isticmaalka internetka iyo caruurta | Somaliska
Waalidiin badan ayaa caruurtooda u ogolaada in ay Intenetka isticmaalaan balse waxaa muhiim ah in ay waalidiintu ogaadaan in internetku uu qatar leeyahay qaasatan uu u leeyahay caruurta. Halkaan waxaan isku dayayaa in aan ku soo bandhigo dhowr qodob oo muhiim ah in ay waalidku kala hadlaan ilmaha internetka Isticmaala. U sheeg caruurtaa... 1. Warbixin qaas ah internetka ha galin: Ku baraaruji caruurtaada in aysan warbixin qaas ah galin internetka sida magaca, telefoonka, waqtiga dhalasha ama kaarka bankiga. 2. Hala balamin qof aad internetka ka baratay: Caruur badan ayaa gala qololka lagu sheekeysto oo ay macquul tahay in ay dad ka bartaan, hadaba ku baraaruji caruurtada in aysan la balamin oo la kulmin dadka ay internetka ka bartaan...caruur badan ayaa jirta oo la xumeeyay ka dib markii ay dadka xun internetka ka barteen. 3. Ha buuxinin foomamka internetka: mararka qaar waxaa iska dhacda in caruurtu ay booqdaan bogag ka dalbanaya in ay buuxiyaan foomam laga rabo in ay ku qoraan warbixin qaas ah, ku baruuriji in aysan buuxin caruurtu foomamka nuucaas ah ama ay waalidka la tashtaan. 4. Ma taqaan dadka MSNka kuugu jira?: Xaqiiji in ay caruurtaada yaqaanaan dadka msnka ay kula sheegeystaan, dad waaweyn ayaa internetka iska dhiga in ay yihiin caruur, ku baraaruji caruurtaada in aysan ku darsan dad aysan aqoon. 5. Haka jawaabin emailada aadan aqoon: sida caadiga ah internetka mararka qaar waxaa laguu soo dirayaa fariimo aadan aqoon cida ay ka yimaadeen, ku baraaruji caruurtaada in aysan ka jawaabin farimaha aysan aqoon cida soo dirtay. 6. Marnaba sawiradaada ha galinin internetka: Qodobkaan aad ayuu muhiim u yahay, u sheeg oo ku adkee caruurtaada in aysan sawiradooda galin internetka - abadan. 7. Ha gudbinin sawirada dadka kale: waxaa macquul ah in caruurtaada asxaabtooda ay u soo diraan sawiradooda ama kuwo kale, ku baraaruji in aysan caruurti sii faafin sawirada dadka kale. waxaa laga yaabaa in waalidka ama qofkaas kale uusan ogoleen in sawirkooda internetka lagu faafiyo. 8. Waxba internetka haka soo dejinin: Bogag badan ayaa laga yaabaa in ay caruurta ka codsadaan in ay dejiyaan barnaamijyo, balse barnaamijyo badan ayaa waxay wataan virus. U sheeg oo ku adkee in caruurtu aysan waxba ka soo dejinin internetka haddii aad aqoon u leedahay waalid ahaan isku day in aad xayirto awooda ay caruurtu wax ku soo dejin karaan. 9. Facebook ka ilaali caruurta: Facebook qofkasta ayaa ku jira balse shuruuda ugu yar waa 13 jir, si kastoo ay ahaataba ka ilaali caruurtaada in ay facebook isticmaalaan uma fiicna mastaqbalkooda iyo maskaxdooda. 10. Baasweerka cidna ha u sheegin: ugu dambeyntii, ku adkee caruurtu in aysan baasweerkooda iyo kuwa waalidkaba aysan cidna u sheegin. 10kaas qodob ayaan soo diyaariyay balse ka badan ayaa macquul ah, waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaan iyaga laftooda ku baraarugsaneyn qatarta internetka sidaas darteedna aan war u hayn waxyaabaha ay caruurtooda ka sameeyaan qadkda.
Waalidiin badan ayaa caruurtooda u ogolaada in ay Intenetka isticmaalaan balse waxaa muhiim ah in ay waalidiintu ogaadaan in internetku uu qatar leeyahay qaasatan uu u leeyahay caruurta. Halkaan waxaan isku dayayaa in aan ku soo bandhigo dhowr qodob oo muhiim ah in ay waalidku kala hadlaan ilmaha internetka Isticmaala.
U sheeg caruurtaa…
1. Warbixin qaas ah internetka ha galin: Ku baraaruji caruurtaada in aysan warbixin qaas ah galin internetka sida magaca, telefoonka, waqtiga dhalasha ama kaarka bankiga.
2. Hala balamin qof aad internetka ka baratay: Caruur badan ayaa gala qololka lagu sheekeysto oo ay macquul tahay in ay dad ka bartaan, hadaba ku baraaruji caruurtada in aysan la balamin oo la kulmin dadka ay internetka ka bartaan…caruur badan ayaa jirta oo la xumeeyay ka dib markii ay dadka xun internetka ka barteen.
3. Ha buuxinin foomamka internetka: mararka qaar waxaa iska dhacda in caruurtu ay booqdaan bogag ka dalbanaya in ay buuxiyaan foomam laga rabo in ay ku qoraan warbixin qaas ah, ku baruuriji in aysan buuxin caruurtu foomamka nuucaas ah ama ay waalidka la tashtaan.
4. Ma taqaan dadka MSNka kuugu jira?: Xaqiiji in ay caruurtaada yaqaanaan dadka msnka ay kula sheegeystaan, dad waaweyn ayaa internetka iska dhiga in ay yihiin caruur, ku baraaruji caruurtaada in aysan ku darsan dad aysan aqoon.
5. Haka jawaabin emailada aadan aqoon: sida caadiga ah internetka mararka qaar waxaa laguu soo dirayaa fariimo aadan aqoon cida ay ka yimaadeen, ku baraaruji caruurtaada in aysan ka jawaabin farimaha aysan aqoon cida soo dirtay.
6. Marnaba sawiradaada ha galinin internetka: Qodobkaan aad ayuu muhiim u yahay, u sheeg oo ku adkee caruurtaada in aysan sawiradooda galin internetka – abadan.
7. Ha gudbinin sawirada dadka kale: waxaa macquul ah in caruurtaada asxaabtooda ay u soo diraan sawiradooda ama kuwo kale, ku baraaruji in aysan caruurti sii faafin sawirada dadka kale. waxaa laga yaabaa in waalidka ama qofkaas kale uusan ogoleen in sawirkooda internetka lagu faafiyo.
8. Waxba internetka haka soo dejinin: Bogag badan ayaa laga yaabaa in ay caruurta ka codsadaan in ay dejiyaan barnaamijyo, balse barnaamijyo badan ayaa waxay wataan virus. U sheeg oo ku adkee in caruurtu aysan waxba ka soo dejinin internetka haddii aad aqoon u leedahay waalid ahaan isku day in aad xayirto awooda ay caruurtu wax ku soo dejin karaan.
9. Facebook ka ilaali caruurta: Facebook qofkasta ayaa ku jira balse shuruuda ugu yar waa 13 jir, si kastoo ay ahaataba ka ilaali caruurtaada in ay facebook isticmaalaan uma fiicna mastaqbalkooda iyo maskaxdooda.
10. Baasweerka cidna ha u sheegin: ugu dambeyntii, ku adkee caruurtu in aysan baasweerkooda iyo kuwa waalidkaba aysan cidna u sheegin.
10kaas qodob ayaan soo diyaariyay balse ka badan ayaa macquul ah, waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaan iyaga laftooda ku baraarugsaneyn qatarta internetka sidaas darteedna aan war u hayn waxyaabaha ay caruurtooda ka sameeyaan qadkda.
waa run in caruurteenu ku jirto halis ah xaga internetka waana arin ubaahan in lagu baraarugo
somaliska oo runtii utaagan caawinta bulshada somalida ayaa markale nagu tiri fadhiga kakaca
somaliska waad mahadsantihiin siina wada danta dadka afka somaliga ku hadla.
kor ahaada kor ahaada
THNX aadaa u mahadsan tihiin waxbadan aana ogeen awal aa hada ogaaday! waa na qaadanaa waanadii na bahda somaliska….. waa mahadsantihiiin markale! <3<3<3